ဒါကြောင့်ဝေး, ငါသည်အကျဉ်းချုပ်စာအုပ်အရှည်ကုသမှု၏ဘာသာရပ်ဖြစ်သည့်ကိုယ်တိုင်ကစုစုပေါင်းစစ်တမ်းအမှားမူဘောင်, ပြန်လည်သုံးသပ်င့် (Weisberg 2005; Groves et al. 2009) ။ ကုန်ကျစရိတ်: ဤမူဘောင်ပြည့်စုံပေမဲ့, ကယေဘုယျအားဖြင့်သုတေသီများအရေးပါသောအချက်တစ်ချက်ထွက်ထွက်သွားဖို့ကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ကုန်ကျစရိတ်-သောအချိန်သို့မဟုတ်တစ်ခုခုဖြင့်တိုင်းတာနိုင်ပါတယ်မရှိသလောက်အတိအလင်းပညာသင်နှစ်သုတေသီများဆွေးနွေးပိုက်ဆံ-ပေမဲ့, ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘေးမှာလျစ်လျူရှုတဲ့စစ်မှန်သောသတ်သည်။ တကယ်တော့အစားတစ်ခုလုံးကိုလူဦးရေထက်လူတို့သုတေသီများအင်တာဗျူးနမူနာအကြောင်းရင်းပိုက်ဆံကယ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ ထို့ကြောင့်စရိတ်စစ်တမ်းသုတေသန၏လုပ်ငန်းစဉ်ကိုမှအခြေခံကျသည် (Groves 2004) ။ လုံးဝကုန်ကျစရိတ်လျစ်လျူရှုစဉ်အမှားအသေးအဖွဲမှတစ်ဦးက Single-စိတ်ဆည်းကပ်အမြဲကျွန်တော်တို့ရဲ့အကောင်းဆုံးအကျိုးစီးပွားအတွက်မဟုတ်ပေ။
အမှားလျှော့ချနှင့်အတူတစ်ဦးစွဲခြင်း၏ကန့်သတ်မှုဖြစ်သူ Scott Keeter နှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ၏မြေမှတ်တိုင်တို့ကိုလေ့လာမှုအားဖြင့်သရုပ်ဖော်ကြသည် (2000) တယ်လီဖုန်းစစ်တမ်းများ non-တုန့်ပြန်မှုကိုလျှော့ချနိုင်ရန်အတွက်စျေးကြီးတဲ့လယ်ကွင်းစစ်ဆင်ရေး၏သက်ရောက်မှုအပေါ်။ Keeter နှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက် "ညှဉ်းဆဲခြင်းကို" လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကိုအသုံးပြုပြီး "စံ" လုပျထုံးလုပျနညျးမြားနှငျ့တစျခုကိုအသုံးပြုပြီးနှစ်ဦးတစ်ပြိုင်နက်တည်းစစ်တမ်းများ, တစျပွေးလေ၏။ "အကိုတိကျခိုင်မာစွာ" လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို non-တုန့်ပြန်တဲ့အနိမ့်မှုနှုန်းထုတ်လုပ်ရန်ကိုပြုသော်လည်း, နှစ်ဦးစလုံးနမူနာကနေခန့်မှန်းတွက်ချက်မှုအခြေခံအားဖြင့်တူညီခဲ့ကြသည်။ သို့သော် "ညှဉ်းဆဲခြင်းကို" လုပျထုံးလုပျနညျးအကြမ်းဖျင်းနှစ်ကြိမ်အဖြစ်တာကုန်ကျနှင့်နေသမျှကာလပတ်လုံး 8 ကြိမ်ကိုယူ။ ကျွန်တော်တို့2ကျိုးကြောင်းဆီလျော်စစ်တမ်းများသို့မဟုတ် 1 ယူနန်ပြည်နယ်ရဲ့စစ်တမ်းနှင့်အတူပယ်ပိုကောင်းပါသလား? အဘယျသို့ကျိုးကြောင်းဆီလျော်စစ်တမ်းများသို့မဟုတ် 1 ယူနန်ပြည်နယ်ရဲ့စစ်တမ်းကို 10 ကော? အဘယျသို့ကျိုးကြောင်းဆီလျော်စစ်တမ်းများသို့မဟုတ် 1 ယူနန်ပြည်နယ်ရဲ့စစ်တမ်းက 100 ကော? တစ်ချိန်ချိန်ကုန်ကျစရိတ်အားသာချက်များကိုအရည်အသွေးအ ပတ်သက်. မရေ, Non-တိကျတဲ့စိုးရိမ်ပူပန်မှုများထားတာတွေရပါမည်။
ဒစ်ဂျစ်တယ်အသက်အရွယ်အသုံးပြုနေသူများကဖန်တီးထိုအခွင့်အလမ်းအများအပြားကသိသာနိမ့်အမှားရှိသည်သောခန့်မှန်းချက်ဖန်တီးခြင်းအကြောင်းမဟုတ်။ ယင်းအစား, ဤအခွင့်အလမ်းများကိုစျေးနှုန်းချိုသာခြင်းနှင့်ပိုမြန်ခန့်မှန်းချက်ဖန်တီးခြင်းအကြောင်း, ဒါပေမယ့်ဖြစ်ကောင်းလက်ရှိအချိန်တွင်ပိုမိုမြင့်မားသို့မဟုတ်တိုင်းတာရန်ခက်ခဲဖြစ်ကြောင်းအမှားများနှင့်အတူဖြစ်ကြ၏။ ဤအခနျးထဲမှာဥပမာအဖြစ်အများအပြားအရည်အသွေးအခြားရှုထောင့်များ၏စရိတ်မှာအမှားအသေးအဖွဲနှင့်အတူ single-စိတ်စွဲလမ်းအပေါ်အပြင်းအထန်တောင်းဆိုသူအသုတေသီများစိတ်လှုပ်ရှားစရာအခွင့်အလမ်းများပေါ်ထွက်လက်လွတ်သွားကြသည်, ကိုပြသပါလိမ့်မယ်။ စစ်တမ်းများပေါင်းစပ်ပြီးအဘို့အကိုယ်စားပြုမှုမှသစ်ကိုချဉ်းကပ်မှု (ပုဒ်မ 3.4), measurement ဖို့နည်းလမ်းသစ်များ (ပုဒ်မ 3.5), နှင့်အသစ်မဟာဗျူဟာ: စုစုပေါင်းစစ်တမ်းအမှားမူဘောင်အကြောင်းကိုဒီနောက်ခံပေးထားကျနော်တို့ယခုစစ်တမ်းသုတေသန၏တတိယခေတ်သုံးအဓိကဒေသများသို့လှည့်ပါလိမ့်မယ် ဒစ်ဂျစ်တယ်ခြေရာတွေ (ပုဒ်မ 3.6) နှင့်အတူ။